China Bvudzi rakatwasanudza ghd Platinum Ceramic Flat Iron Inokiya Kugadzira Chishandiso fekitori nevatengesi | Ubetter
Bvudzi Straightener ghd Platinum Ceramic Flat Iron Inokiya Kugadzira Chishandiso
Kuchenesa mamiriro: 120 ℃, 140 ℃, 160 ℃, 180 ℃, 200 ℃
1, Hapana hovhoni yekumhara, hapana dhonza: 360 ° inotenderera yakareba mutsara bvudzi straightener, yakakodzera vakadzi, chiyero kupisa ndiro, famba kana iwe uchiita chiito. Iyo bhodhi ine kumucheto kwakakombama inogona kugadzirisa iyo kona ichienderera, kudzivirira kubata bvudzi, uye kurega iwe uine yakawanda kutonga kana uchienzanisa.
2, PTC ndiro uye ion jenareta: kupisa kuchinjisa nekukurumidza kupfuura zvimwe zvinhu, zvichikupa iwe chinogara chimiro mune ipfupi nguva. Anion balance bvudzi, bvisa yakamira magetsi uye bvudzi.
3、2 mu 1 straightener uye curler: chinja pakati pebvudzi rakamonana uye rakamonana chero nguva.
4, Dual voltage flat iron: iyo yepasirese & yepasirose huviri voltage inoenderana 120v-240v basa, unogona kuitora kuenda kuzororo rinotevera. Shandisa iyo 360 degree kutenderera tambo kufamba zvakasununguka.
5, Kiyi yekuchengetedza - ironing yakachengeteka, yakachena uye nyore kuchengeta.
6 、 Vakadzi chipo chekuzvarwa: chipo chikuru kumukadzi wako, amai, mbuya, hanzvadzi, mwanasikana, shamwari yepamwoyo kana musikana. Iyi hair straightener chipo chinonakidza uye chakasarudzika, icho chinozoita kuti mukadzi akasarudzika muhupenyu hwako anzwe kukosheswa uye kuda.
* Saizi yechigadzirwa: 28.0x2.8x6.7cm
* Kurema: 330g
* Saizi yeBhokisi: 35.0x9.0x4.5cm
* Saizi yeCtn: 38.0x36.0x28.5cm
* Qty pamusoro 20 ``: 17230pcs
* Qty ye40 '': 34462pcs
* Qty ye40HQ: 41846pcs
Pashure: Bvudzi Straightener Ceramic Kuputira 5-Chikamu Kupisa Chinogadziriswa Chinosimudza Mudziyo
Zvadaro: Bvudzi Straightener Nyanzvi PTC Inopisa LCD Flat Bvudzi Iron
Bvudzi Straightener Ceramic Kubata 5-Chikamu Tempe ...